War Deg Deg Ah:Dawlada Pakistan Heshay Sir Halis Badan oo Hindiya Ka fakatay – KHAATUMO NEWS
War Deg Deg Ah:Dawlada Pakistan Heshay Sir Halis Badan oo Hindiya Ka fakatay
Dawladda Pakistan ayaa sheegtay in heshay “xog sirdoon oo lagu kalsoonaan karo” oo sheegaysa in Hindiya ay qorshaynayso in ay weerar milatari ku soo qaaddo toddobaadkan, balse Hindiya ayaa arrintaas waxba kama jiraan ku tilmaantay, waxayna sheegtay “in Pakistan ay qabto cabsi dagaal oo xad dhaaf ah”.
Wasiirka arrimaha dibadda Shah Mehmood Qureshi ayaa hadalkaas sheegay Axaddii.
Iyadoo uusan awalba wanaagsanayn calaaqaadka labada dal ayuu haddana sii xumaaday sannadkan ka dib markii malayshiyo uu saldhigeedu yahay Pakistan ay dishay tobannaan ka mid ah ciidammada Hindiya ee ku sugan qaybta ay Hindiya maamusho ee gobolka Kashmir.
Hindiya ayaa arrintaas kaga jawaabtay duqaymo dhanka cirka ah oo kuwaas oo ay ku bartilmaameedsatay waxay ku tilmaantay xerooyin ay ku tababartaan malayshiyaad oo ku yaalla gudaha Pakistan.
Wax yar ka dibna Pakistan ayaa soo ridday diyaarad dagaal oo Hindiya leedahay taas oo maraysay qaybta ay Pakistan maamusho ee Kashmir, waxayna qabatay duuliyihii, balse maalmo ka dib ayaa loo celiyay Hindiya.
Duqaymihii dhanka cirka ahaa ee bishii Feebaraayo oo ka tallaabay xadka ay kala maamulaan ayaa ahaa kii koobaad tan iyo wixii ka dambeeyay dagaalkii Pakistan iyo Hindiya ku dhex maray Kashmir 1971.
Labada dalba waxay sheegraan in ay leeyihiin gobolka Kashmir ee Muslimiintu aqlabiyadda ka yihiin, balse mid kaste qayb ayuu maamulaa.
Previous Post: Deg Deg Daawo:Duqa Muqdisho Oo Caayay Mucaaridka Dawlada+Muxuuse Ku Sheegay Daawo Yaabka?
Next Post: Deg Deg Daawo:Ilhaan Cumar Oo Dil Ka Badbaaday,